प्रमोदका लागी मरिमेट्दै केकी, हातमा उनको नाम लेखी ! भिडियो « Mazzako Online
प्रमोदका लागी मरिमेट्दै केकी, हातमा उनको नाम लेखी ! भिडियो
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, मंसिर १०–
के तपाई नायिका केकी अधिकारीको फ्यान हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ कि उनी चाहि कसकी फ्यान हुन् ? लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको हजारौँ फ्यान मध्ये केकी पनि एक हुन् ।
वास्तविक जीवनमै प्रमोदको गायकिको फ्यान रहेकी केकी अब म्युजिक भिडियोमा पनि उनकै जर्बजस्त फ्यानको रुपमा देखिएकी छिन् । प्रमोदद्धारा स्वरबद्ध एउटा गीत ‘धेरैलाई बाँड्दा नपुग्ला माया’ को म्युजिक भिडियोमा भनें उनले प्रमोदको जर्बजस्त फ्यान भएको दर्शाउन लोभलाग्दो अभिनय गरेकि छिन् । भिडियोमा हातमै प्रमोद लेखिएको ट्याटुका साथ उनी ‘डाइहार्ट फ्यान’ भएको अभिव्यक्त गर्छिन् । प्रमोदलाई पछ्याउँदै स्टुडियो देखि कर्न्र्सटसम्म उनी धाउछिन् । अन्तत : उनीहरुबीच भिडियोमा प्रेम अंकुरण हुन्छ ।
तर शहरिया जीवनशैलीमा भर्खर घुलमिल हुदै गर्दा युवतीहरु विचलित भएर साँचो प्रेम विर्सदैं धेरैको बेडसम्म पुग्छन् भन्ने पात्रको रुपमा केकीले अभिनय गरेकि छिन् । पछि वितृष्णा भएर वैराग्य भावमा उनी प्रमोदसंग माफी माग्छिन् तर केकीलाई पनि साँचो माया गरेका प्रमोद उनको प्रेम स्वीकार्ने नस्विकार्ने दोसाँधमा देखिन्छन् ।
भिडियोको मुलत : कथा यहि नै हो । अमेरिका बस्दै आएकि श्रद्धा अधिकारीको शब्द र संगीतकार अर्जुन पोख्रेलको संगीतमा बनेको यो गीतलाई धेरै स्रोताले रुचाएका छन् । भिडियोमा प्रमोद र केकीका अतिरिक्त सहज बराल र सुमित ढकालले अभिनय गरेका छन् । हरि हुमागाईको छायाकंन र निशान घिमिरेको सम्पादन रहेको यो म्युजिक भिडियोलाई एकसाता भित्रै हजारौं दर्शकले युट्युब मार्फत हेरिसकेका छन् । यस म्युजिक भिडियोको निर्देशन पत्रकार विदुर खतिवडाले गरेका हुन् ।